အမြဲလို အနားမှာရှိတဲ့ ခွေးလေး သေဆုံးသွားတာကြောင့် ဝမ်းနည်းနေတဲ့ သဇင်ထူးမြင့် – Suehninsi
ပရိသတ်တွေ ချစ်စနိုးနဲ့ သဲလို့ ခေါ်ကြတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်ကတော့ ဦးခင်လှိုင်ရဲ့အနုပညာအမွေကို ဆက်ခံထားသူတစ်ယောက်ပါ။ ဖခင်လိုပဲ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြည့်နဲ့အားပေးဝန်းရံသူပရိသတ်များစွာရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးလေးဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး ။ ရွှေကြိုတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ အနုပညာလောကထဲကို ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး
အခုဆိုရင်တော့ ကြော်ငြာတွေဆက်တိုက်ရိုက်ကူးနေရပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သဲကတော့ သူ့ရဲ့တနေ့တာအကြောင်းအရာလေးတွေကို ဖေ့ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှာ အမြဲမျှဝေပေးလေ့ရှိသူတစ်ယောက်ပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ စိတ်မကောင်းစရာသတင်းလေးတစ်ခုကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ သဲရဲ့အနားမှာ
အမြဲရှိနေတတ်တဲ့ အချစ်ရဆုံးခွေးလေး ဂိုဂိုးဆုံးပါးသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး “အချိန်ခဏလေးပဲ ဆုံခဲ့ရတဲ့ကလေးလေး တစ်အိမ်လုံးမှာသူအကဲဆုံး အမြဲတက်ကြွနေပြီး လူမရှိရင် အရမ်းကြောက်တတ်တဲ့ကလေးလေး… ရုတ်တရက်ကြီး ကလေးလေးရယ်… အရင်က
ဆိုမျက်စိနောက်လောက်အောင်ဆော့လွန်းတာ… နေမကောင်းတဲ့သုံးလေးရက်မှာ အရမ်းငြိမ်သွားလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာ ….အရင်လိုပြန်ဆော့စေချင်တာ သမီးလေးဂိုဂိုးရယ်… အမြဲသတိရနေမှာပါ…. အချိန်အကြာကြီးမနေလိုက်ရပါလား သမီးရယ်” ဆိုပြီး စိတ်မကောင်းစွာ
မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို ချစ်တတ်လွန်းတဲ့ သဲအတွက်တော့ ဂိုဂိုးလေးသေသွာတာက တကယ်ကို ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခု ဖြစ်နေမှာအမှန်ပါပဲ။ လူမရှိရင်တောင် အရမ်းကြောက်တတ်တဲ့ချစ်စရာခွေးလေးဂိုဂိုး ကောင်းရာမွန်ရာရောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဝမ်းနည်းနေတဲ့ သဲအတွက် အားပေးစကားလေး ပြောပေးခဲ့ပါဦး ပရိသတ်ကြီးရေ…
ပရိသတျတှေ ခဈြစနိုးနဲ့ သဲလို့ ချေါကွတဲ့ သဇငျထူးမွငျ့ကတော့ ဦးခငျလှိုငျရဲ့အနုပညာအမှကေို ဆကျခံထားသူတဈယောကျပါ။ ဖခငျလိုပဲ ခဈြခွငျးမတ်ေတာအပွညျ့နဲ့အားပေးဝနျးရံသူပရိသတျမြားစှာရရှိထားတဲ့ မငျးသမီးလေးဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူး ။ ရှကွေိုတဈယောကျအဖွဈနဲ့ အနုပညာလောကထဲကို ဝငျရောကျခဲ့ပွီး
အခုဆိုရငျတော့ ကွျောငွာတှဆေကျတိုကျရိုကျကူးနရေပွီလညျး ဖွဈပါတယျ။ သဲကတော့ သူ့ရဲ့တနတေ့ာအကွောငျးအရာလေးတှကေို ဖဘှေ့တျချစာမကျြနှာမှာ အမွဲမြှဝပေေးလရှေိ့သူတဈယောကျပါ။ ဒီနမှေ့ာတော့ စိတျမကောငျးစရာသတငျးလေးတဈခုကို မြှဝခေဲ့ပါတယျ။ သဲရဲ့အနားမှာ
အမွဲရှိနတေတျတဲ့ အခဈြရဆုံးခှေးလေး ဂိုဂိုးဆုံးပါးသှားခဲ့တဲ့အကွောငျးနဲ့ပတျသကျပွီး “အခြိနျခဏလေးပဲ ဆုံခဲ့ရတဲ့ကလေးလေး တဈအိမျလုံးမှာသူအကဲဆုံး အမွဲတကျကွှနပွေီး လူမရှိရငျ အရမျးကွောကျတတျတဲ့ကလေးလေး… ရုတျတရကျကွီး ကလေးလေးရယျ… အရငျက
ဆိုမကျြစိနောကျလောကျအောငျဆော့လှနျးတာ… နမေကောငျးတဲ့သုံးလေးရကျမှာ အရမျးငွိမျသှားလို့ စိတျမကောငျးဖွဈနတော ….အရငျလိုပွနျဆော့စခေငျြတာ သမီးလေးဂိုဂိုးရယျ… အမွဲသတိရနမှောပါ…. အခြိနျအကွာကွီးမနလေိုကျရပါလား သမီးရယျ” ဆိုပွီး စိတျမကောငျးစှာ
မြှဝခေဲ့ပါတယျ။ တိရစ်ဆာနျလေးတှကေို ခဈြတတျလှနျးတဲ့ သဲအတှကျတော့ ဂိုဂိုးလေးသသှောတာက တကယျကို ကွီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတဈခု ဖွဈနမှောအမှနျပါပဲ။ လူမရှိရငျတောငျ အရမျးကွောကျတတျတဲ့ခဈြစရာခှေးလေးဂိုဂိုး ကောငျးရာမှနျရာရောကျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။ ဝမျးနညျးနတေဲ့ သဲအတှကျ အားပေးစကားလေး ပွောပေးခဲ့ပါဦး ပရိသတျကွီးရေ…
Source : Thazin Htoo Myint | Reference & Credit : Cele Gabar